Dhalinyaro Soomaali ah oo Jihaad u aaday Syria | Somaliska
Dhalinyaro Soomaali ah oo gaareysa 5 qof ayaa la sheegay in ay jihaad u aadeen dagaalka ka socda dalka Syria. Dhalinyaradaan ayaa ka baxay xaafada Vivalla ee magaalada Örebro. Qaar ka mid ah familada dhalinyaradaan ayaa eeda dusha ka saaray masjidka weyn ee magaalada Örebro iyagoo sheegay in halkaas lagu tashkiiliyay dhalinyaradaan.
Dhalinyaradaan ayaa la sheegay in ay ahaayeen kuwo ku dhashay Sweden iyo kuwa iyaga oo da’da yar la keenay wadankaan oo jaamacadaha dhiganayay. Booliska Örebro ayaa sheegay in ay soo gaadhay warbixin ku saabsan arimahaan balse aysan wali cidna soo xirin. Sababta ay dhalinyaradaan Soomaalida u aadeen Syria ayaa ah mid lala yaabo, iyadoo aysan ahayn markii ugu horeysay ee dhalinyaro Soomaali ah ay ka tagto Sweden oo ay dagaal u aadaan Syria.
Qaar ka mid ah waalidiinta dhalinyaradaan ayaa booliska Sweden ugu baaqay in ay baaritaan ku sameeyaan cida ka dambaysa oo caawisay in dhalinyaradaan ay dagaalka aadaan. Intooda badan ayaa ah kuwo aan aqoon u lahayn wadanka Syria isla markaana aan haysan xitaa lacag ay diyaarad ku raacaan.
Dad caraysan ayaa la sheegay in ay weeraradeen masjidka Örebro markii la sheegay in ay lug ku leeyihiin tashkiilinta dhalinyaradaan. Si kastaba ha ahaatee, maamulka Masjidka ayaa iska fogeeyay in ay wax lug ah ku leeyihiin arimahaan.
asc marka hore arinta wiilashan aaday dalka syria ma aheen in masaajidka dusha laga saaro ama loo weeraro beytka ilaahay,ilama ahan arin fiican in la wasaqeeyo magaca masaajida oo argagixisnimo lagu shaambadeeyo. mas’uuliyada 1aad waxaa qaadaya waa waalidiinta, maxa yeeley waxay gabeen hooshoodii aheed inay la socdaan xaalada caruurtood. waxaa la rabay inay lasaaxiibaan caruurtooda oo ay wax walbo lasdoo gudboonaada ay war kahayaan, ma ahan in darbiyada madaxa lagu garaaco mar ay talo faraha kabaxday. wabillaahi tawfiiq
aniga waxaan ka mid ahay dadka labada sano lagu xujeeyay waxeey iisoo tuureen diidmo oo waxeey iigu dheheen maba kaa qaadeyno nuunada dhiig sababta ugu horeeyso oo aan diidmada kuugu siinay ayaa waxeey tahay inaad isvaariya ku dhashay oo balaa aabo aad markii kowbe dhashay oo cunugaada kuma dhex dhalan aabo iyo hooyo dhexdooda yacnii waa ka ahaan karaa tan labaad ayeey iiga dhigeen sabab inaan labo sano isla nooleen aniga iyo ninkeey intaan isfaariya imaan… qofkii war bixin cusub haayo hanala soo socodsiiyo si aan isaga kala faaideysano mahadsanidiin.
marka koowaad waan ka xumahay waalidkaas ilamahoodii uu gacanooda ka baxay waxaana lee yahay Rabi nabad ha idiinku soo celiyo
tan labaad waxaan ku talinayaa masaajidka iyo maamulkiisa inta aydan eeda saarin kaw idinku naftiina ku noqda eedo idinkaa iska leh aabo iyo hooyo aan caruurtooda warba u hayn in ay la kulmaan wax aysan filayn waa caadi ilma aan la ogayn waxa kusoo kordhay oo aan lala sheekaysanayn an la dodayn (doodu maaha tii fadhi ku dirirka )afkaarta uu qabo aan laga sheekaysanayn iyadoon la habaarin, la huruufin, loo han jabin, la isku dayayn in la qanciyo iyadoo tixgalin loo muujnayo la dareensiinayo in uu xaq u leeyahay in uu fikirkiisa dhiian karo laakiin laga niqaashi karo oo haduu fikirku khaldan yahay in laga noqdaa aysan ceeb ahayn (taas laftigeeda waa inuu adiga kaa arkaa oo haduu kaa saxan yahay aadan dhihin ma anaad i leedahay waad khaldan tahay e aad khaladkaaga ictiraaftid ) waalidaw aan dib isugu noqo o caruurteena aan ka war hayno Rabiyaw awlaada noo ad baadi
marka hore walidka ayaga masuul ka ah carurtoda mana ahaan inay masajidka dushaa kasaraan waa inay lasocdan dhaqanka carurtoda
Runtii arrintani waa mid feker dheer ka danbeeyo ama dano kale laga leeyahay (Majiraan oo majitaan oo waa been un Masjid laga tashkiiliyo dadka oo loo diro dagaalo waddamo kale ah) Illaahay baan idinku dhaarshaye kuligeen masaajidaha waan ku tukanaaye qofkee baa arkay Masjid laga leeyahay baxa dagaalada aada? waa dacaayado loo samaynayo Masaajidaha Illaahay laguna doonayo in lagu xirxiro. Wallaalayaal afkiina marnaba yaynan soo marin guryaha Illaah baa dhibaatooyin laga dhax wadaa, Asc
Waalidka hawshooda mey gabin, carruurtan wey ka weyn yihiin 18 jirro… qaarkood ay u shaqeynayeen shirkado magac ku leh waddankan… waalidka wuu tarbiyeeyey carruurtiisa oo ilaa heer jaamacadeed gaarsiiyey halka carruur kale oo iyaga fursad wanaagsanaa ay derbiyada fadhiyaan ama ay ku guuldarreysteen inay tacliintii sii wataan.
Waan idinku raacsanaahay inay qalad tahay in masjidka la weeraro, masjidna uusan waxba hallayn balse masjidka waa meel cibaado oo qof kasta oo salaad raba uu ku tukan karo oo had iyo goor masjidka albaabadiisu wey furan yihiin. Maamulka masjidka ayaa looga baahan yahay iyo odayaasha inay feejignaan dheeri ah inay muujiyaan si aan masjidka lagu gabban oo aan dhib la gelin masjidka keliya ee ay dadku haystan oo dhibtii laga maray lawada og yahay.
Soomaalida joogta magaalada Örebro, gaar ahaan xaafadda Vivalla waxaan dhihi lahaa ‘Hurdada soojeedka ka toosa, NIN HURDAA LA TOOSIYAA BALSE NIN SOO JEEDA HURDO KA TOOSIN!!!!
Waxaa ila qumanaan lahayd inaan la damqanno in waalidkii carruurtan dhalay iyagu lagu yiri carruurta masuul kama tihiin oo weyka weyn yihiin 18 oo innagiina aan eed ugu darno.
Waxaa loo baahan yahay in Bulshada Soomaaliyeed ee kunool Sweden, gaar ahaan Örebro ay isku tashato oo ay ka gudubto REERKAYAGA MA AHAN… maalintay runi run noqoto inaadan ka fakanayn ee meel halaysugu yimaado ee hala soo jaro boqolaalka jaaliyado ku sheega oo ha laysugu yimaado jaaliyad ama urur dadka meteli kara oo afduub dadka ku haysa oo garbaduubna dadka u hayn oo wanaagga iyo caddaalad kula shaqeeyaa oo ugu adeega bulshada.
Walaal ka taxadar ,, dhagarta masaajida loo maleegaa ..
Masaajidkii la rabo in la xiraba ama la xanimo ,
dhalinyaro iskood u tagtay ,, oo internetka laga tashkiiliyay ,, ayaa masaajidka loo saarinaa..
Asc Abu Xudayfa qoraalkaaga waa mid aad u gaaban oo qiimo badan leh beena kuma aadan sheegin wallaal, Illaahay ha inaga dhigo kuwo sidaa u fahmo Asc
WA CIYAALKI ABGAAL LEE,HAWIYAHAAN MEELKASTO XARAAN BEY KUYIHIN KHAAS
ilaaahi ku abuuraty ka cabso ninkan umada caynaya waxan ka codsanaya qofkasta oo arka qofkan dadka caynaya inaan loo jawabin lana tuso in hadalkisa cidna wax yeeleen ee isaga afkisa jaanaba ku raadsanayo ilaahow naarta naga xoree
xawo maxaa war adoo mahadsan ah oo kaheesaa arimihii 2 sano
abayo ader bal wareso isaga xoga raja ah ii shegay oo qolada red cros u la hadlay
AQoon sare, isku duubni. says:
Dhibaatada anagaa isukeeney waayo waxaan ka tagney islamkii somalia.
oo waxaan qaadanay kii carabta.
Keenii hore ayaa inoo roonaa, waayo laysma khasbi jirin,
Qofwalba waxa uu ahaa xor 85% inta kale waaridkaa dadka maamuli jirey aabe iyo hooyo, kii hadba dhow,
Laakiin maanta dhalinyaradeena waxaa laga maamulaa misaajidka, iyo meel aan la aqoon.
islamka somalia waa fiicnaa, islamka carabta ayaa inoo keeney dhibka iyo isqarxinta.
Waa aragtideyda, kolay.